Fiparitahana laza adina bakalôrea :: Nosamborina ireo mpahay kajimirindra miisa sivy sy mpandrindra ankapobeny iray • AoRaha
Fiparitahana laza adina bakalôrea Nosamborina ireo mpahay kajimirindra miisa sivy sy mpandrindra ankapobeny iray
Niroso tamin’ny fisamborana ireo mpiasa miisa folo nahitana mpahay kajimirindra sy ny mpandrindra ankapobeny tao amin’ny trano mitoka-monina nisy ireo olona nikirakira ny laza adina Bakalôrea, eny Anosy Avaratra, ny Zandarimaria, omaly alina. « Niandry ny fahavitan’ny fanadinana Bakalôrea izahay vao niroso tamin’izao fisamborana izao mba tsy hisian’ny mety ho korontana amin’ny fikarakarana ny fanadinana », hoy ny loharanom-baovao iray akaiky ny mpanao famotorana.
Notazonina ao amin’ny trano mihiboky ny Zandarimaria, eny Betongolo, izy ireo taorian’ny fisamborana. Raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany dia hatolotra ny Fitsarana eny Anosy iretsy olona voasambotra iretsy, anio ihany. « Efa vita ny fakàna am-bavany azy ireo. Tsy tokony hisy ny olana amin’ny fanolorana azy ireo ny fitsarana rahampitso », hoy hatrany ny loharanom-baovao, halina.
Araka ny tarehimarika avy amin’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, Kaomandin’ny Zandarimaria dia miisa telo amby efapolo ireo olona voarohirohy tamin’ity fanaparitahana ny laza adina Bakalôrea farany teo ity manerana ny Nosy, izay nofotoran’ny Zandarimaria. Ny enina tamin’ireo naiditra am-ponja vonjimaika. Miisa sivy ireo nahazo fahafahana vonjimaika saingy arahin’ny Fitsarana maso akaiky. Isan’ireo ny talen’ny Ofisin’ny Bakalôrea eto Antananarivo teo aloha.Tsy maintsy manatona ny tobin’ny Zandarimaria eny Betongolo izy ireo isan-kerinandro. Ny ambin’ireo voampanga kosa nahazo fahafahana vonjimaika avokoa miandry ny fotoam-pitsarana azy.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana :: Zandary fito amby dimampolo nogadraina, iraika amby dimampolo hafa miandry Fitsarana
Fifaninanana hatsaram-bika sy tarehy :: Raikitra ny savorovoro eo amin’ireo « Miss Madagascar» sy ny mpikarakara